PowerPoint Ithuluzi Lokulungisa. PowerPoint Ukubuyisela Isoftware. Lungisa amafayela we-PPTX.
DataNumen PowerPoint Recovery iyona best PowerPoint ithuluzi lokulungisa emhlabeni. Ingalungisa okonakele PowerPoint Amafayela we-PPTX futhi alulame idatha yakho eningi ngangokunokwenzeka, ngaleyo ndlela anciphise ukulahleka kokonakala kwefayela.
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,448)
Kungani DataNumen PowerPoint Recovery?
Izici eziyinhloko ku DataNumen PowerPoint Recovery v1.9
Sekela iMicrosoft PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 futhi PowerPoint Amafayela we-Office 365 pptx.
Ukusekela ukuthola kabusha ama-slide masters, ukwakheka, amaslayidi, ama-master masters, amanothi, ama-masterout nezindikimba.
Ukusekela ukuthola zonke izinhlobo zemidiya, kufaka phakathi izithombe, amamodeli we-3D, amavidiyo nama-audios.
Ukusekela ukulungisa PowerPoint amafayela kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukulungisa iqoqo le- PowerPoint amafayela.
Ukusekela ukuthola nokukhetha ifayela le- PowerPoint amafayela azolungiswa kukhompyutha yendawo.
Ukuxhaswa kokusekelwa neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa i- PowerPoint ifayela elinemenyu yokuqukethwe ye-Windows Explorer kalula.
Ukusebenzisa DataNumen PowerPoint Recovery Ukubuyisa Amafayela we-PPTX Akhohlakele
Lapho yakho PowerPoint Amafayela we-PPTX akhohlakele noma alimele futhi awukwazi ukuwavula ngokujwayelekile, ungasebenzisa DataNumen PowerPoint Recovery ukuskena amafayela we-PPTX futhi uphinde uthole idatha eningi evela kubo ngangokunokwenzeka.
Qaphela: Ngaphambi kokuthola noma yimaphi amafayela we-PPTX akhohlakele noma onakalisiwe nge DataNumen PowerPoint Recovery, sicela uvale noma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha amafayela we-PPTX.
Khetha ifayela le-PPTX elonakele noma elonakele elizotholwa:
Ungafaka igama lefayela le-PPTX ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le- ukuthola ifayela le-PPTX elizotholakala kukhompyutha yendawo.
Ngephutha, DataNumen PowerPoint Recovery izogcina ifayela le-PPTX elibuyiselwe kufayela elisha elibizwa nge-xxxx_fixed.PPTX, lapho i-xxxx igama lefayela lomthombo le-PPTX. Isibonelo, kumthombo we-PPTX we-Damaged.PPTX, igama elizenzakalelayo lefayela elitholakele lizoba le-Damaged_fixed.PPTX. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Khetha igama lefayela elihleliwe
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen PowerPoint Recovery intando start ukuskena nokubuyisa ifayela lomthombo le-PPTX.
Ngemuva kwenqubo yokutakula, uma ngabe ifayili lomthombo le-PPTX lingatholwa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo kanjena:
Manje usungavula ifayela le-PPTX elibuyisiwe nge-Microsoft PowerPoint.
DataNumen PowerPoint Recovery 1.4 ikhishwa ngoDisemba 14, 2020
DataNumen PowerPoint Recovery 1.2 ikhishwa ngoNovemba 3, 2020
DataNumen PowerPoint Recovery 1.1 ikhishwe ngo-Okthoba 29, 2019
DataNumen PowerPoint Recovery 1.0 ikhishwa ngoJanuwari 18, 2019
Sekela iMicrosoft PowerPoint 2007 kuya ku-2019 futhi PowerPoint Amafayela we-Office 365 pptx.